2 သိန်း မှ3သိန်း ထိ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိငှါးရန်တိုက်ခန်းများ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ရေကျော်လမ်းမအနီး လမ်းသန့် 1F(12'½'x50')1BR.ကြွေခင်း.ပြင်ဆင်ပြီး. သွားလာရေးအဆင်ပြေ.ဈေးနီ.ကျောင်းနီး.ကားမှတ်တိုင်းနီး.နေထိုင်ရန်အကောင်း....
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16751160 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
PZDG 39 ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အခန်း ၂ခန်းပါ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16717884 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
PZDG 32 ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် အခန်း ၂ခန်းပါ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16717318 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16573871 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16566136 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမပေါ် 1F(12½'x50') Hall. ပါကေးခင်း .1A/C.ပါကေးခင်း. ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေ. လူနေရုံးခန်းကောင်း. သွားလာရေးအဆင်ပြေ.ဈေးနီး ကျောင်းနီ. ကားမှတ်တိုင်နီး. ရွှေဘုန်းပွ...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16537581 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
PZDG 39/ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ယုဇနလမ်းတွင် မြေညီအငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16531195 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
PZDG 32/ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရေကျော်လမ်းတွင် တိုက်ခန်းအငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16530720 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဝတ်ကျောင်းလမ်း တွင် အခန်းငှားရန် ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16501681 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ရေကျော်လမ်းသန့် (13×55)_GF_3သိန်း
ကြော်ငြာနံပါတ် R-16491798 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အဓိကသတ်မှတ်ထားသည့်မြို့နယ်များတွင်ပါဝင်သည့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်သည် ၈.၅၃၈ ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းသောမြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ Downtown ဧရိယာတွင်အကျယ်ဆုံးမြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ သာကေတမြို့နယ် ၊ ဒေါပုံမြို့နယ်တို့နှင့်ဝန်းရံထားသောမြို့နယ် ဖြစ်သည် ။ ပုဇွန်တောင်မှတဆင့်သွားလာရလွယ်ကူစေရန်အတွက် ပုဇွန်တောင်ဘက်မှ ဒေါပုံသို့ မဟာဗန္ဓုလတံတားဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသည် ။ မူလတန်းကျောင်း ၉ ကျောင်း ၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၃ ကျောင်း နှင့် အထက်တန်းကျောင်း လေးကျောင်းတည်ရှိသည် ။ ပုဇွန်တောင်ဈေးနှင့် ရေကျော်ဈေးသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းနေထိုင်သူ တော်တော်များသွားရောက်သည့် လူသိများဈေးဖြစ်သည် ။ ဗြိတိသျှလက်ထက် အဆောက်အဦးများကျန်ရှိနေသေးသည့်မြို့နယ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင်လည်း ဗြိတိသျှဗိသုကာလက်ရာများကို မြင်တွေ့နိုင်သည် ။ ဘာသာခြားလူမျိုးပေါင်းစုံ စည်းလုံးစွာနေထိုင်သည့် မြို့နယ်ဖြစ်သည့်အပြင် အတော်အသင့်စည်ကားသည့်မြို့နယ်များထဲက တစ်ခုဖြစ်သည် ။ Downtown ဧရိယာတွင် အခြားမြို့နယ်နှင့်ယှဉ်လျင် လူနေတိုက်ခန်းများ ၊ ကွန်ဒိုများ ၊ လုံးချင်းအိမ်များ အတော်အတင့် မျှတစွာရှိသည့်မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်သည် ဧရိယာကျယ်ဝန်း သည့်အပြင် လူနေထူထပ်ပြီး စည်ကားသွားလာကောင်းသောမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။